Iselula TV Group Ingeza NGOKWENZA I-Telestrators Yokukhiqizwa Kwezemidlalo Okubukhoma | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » Iselula TV Group Ingeza NGOKWENZA I-Telestrators Yokukhiqizwa Kwezemidlalo Okubukhoma
Iselula TV Group Ingeza NGOKWENZA I-Telestrators Yokukhiqizwa Kwezemidlalo Okubukhoma
I-Cypress, CA, Novemba 19, 2020 - I-FOR-A Corporation of America namuhla imemezele i-Mobile TV Group, egcina izimoto ezingaphezu kwamashumi amabili nambili zamayunithi wokukhiqiza amaselula emadolobheni amakhulu ase-US, engeza izingcingo ezine ezintsha ze-FVW-700 ekukhiqizeni kwayo bukhoma amaloli kulo nyaka, kufaka phakathi amabili ngenyanga edlule. Isekelwe e-Englewood, eColo., I-Mobile TV Group inikela ngezinsizakalo zokukhiqiza bukhoma kakhulu ekusakazweni kwe-NBA, NHL, ne-MLB, phakathi kwamanye amaphrojekthi.
"Abasebenza ngocingo bayingxenye ebalulekile yokusakazwa kwezemidlalo bukhoma" kuchaza uNick Garvin, COO weSelula TV Group. "Sekuneminyaka sisebenza ngokulinganisa nocingo lwe-FOR-A ezingxenyeni zethu ezingomahamba nendlwana ngoba zithembekile futhi zisebenziseka kalula."
"I-FOR-A ibisenza ama-telestrator amashumi eminyaka, kanti i-FVW-700 isiphenduke indinganiso yezimboni yamaloli wokukhiqiza eminyakeni embalwa edlule," kusho uDavid Morris, umphathi we-FOR-A wesifunda sentengiso esentshonalanga. “Ukukhiqizwa kwezemidlalo bukhoma kungumgogodla kubasakazi namanethiwekhi wamakhebuli, futhi amasheduli aseqala ukubuyela emazingeni angaphambi kwe-COVID. I-FVW-700 isiza iMobile TV Group ukuletha okuqukethwe kwezemidlalo okuheha ngokuthembeka futhi kungabizi. ”
Ngezinketho ezibanzi zokudala zesichasiselo esikrinini, i-FVW-700 telestrator iyatholakala ngokulungiswa okuthathu ukuhlangabezana nezidingo ezithile, kufaka phakathi i-4K, I-HDMI, nawo wonke-in-one amamodeli. Abasebenzisi bangadweba mahhala, kanye nemigqa eqondile nobubuciko bomfanekiso, besebenzisa imigqa ehlukahlukene, ubukhulu, ububanzi bomphetho, nemibala. Izinombolo, izithombe ezimile, kanye nokugqwayiza nakho kungabekwa ngaphezulu kwevidiyo. Amathuluzi athuthukile afaka ukwakheka okuzenzakalelayo kwamahhala, okusebenzisa i-algorithm yokwehlisa umsindo ukuvumela ama-engeli abukhali kanye nezinto ezibushelelezi ezibunjiwe, nokujoyina onqenqemeni, okusebenzisa i-algorithm enikezela onqenqemeni ebona imiphetho yemigqa edwetshiwe njengezinhlaka zesimo esikhudlwana bese iyazijoyina . Inketho yayo yethebhulethi engenantambo ivumela opharetha ukulawula i-FVW-700 ngenethiwekhi, eyenza opharetha abaningi noma abahlaziyi bakwazi ukudweba esikrinini ukude futhi ngasikhathi sinye.
OKWE ukukhiqiza bukhoma ukukhiqizwa kwezemidlalo I-Telestrator 2020-11-19
Ngaphambilini: I-Streamliner Productions iba yinto yokuqala efihla i-xR Partner eNew Zealand
Olandelayo: Isiteshi sethelevishini i-Hearst Sisebenzisa Amanethiwekhi we-TVU ekusakazeni okukude kwansuku zonke